မြန်မာနိုင်ငံကို သုံးလကျော်အတွင်း နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ ကန်ဒေါ်လာ ၁၃၂၁ ဒ?? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံကို သုံးလကျော်အတွင်း နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ ကန်ဒေါ်လာ ၁၃၂၁ ဒ??
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၅
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်အထိ နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကန်ဒေါ်လာ ၁၃၂၁ ဒသမ ၃၈၁ သန်းဝင်ရောက်ထားပြီး ယမန်နှစ်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ ၆၅၉ သန်း ပိုမိုဝင်ရောက်လာကြောင်း သိရသည်။ ယမန်နှစ်အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်အတွင်း နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏကန်ဒေါ်လာ ၆၆၂ ဒသမ ၁၉၈ သန်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်ကာလအတွင်း ၁၃၂၁ သန်းဝင် ရောက်သည့်အတွက် ကန်ဒေါ် လာ ၆၅၉ သန်းပိုလာကြောင်း ရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြား မှုဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်နိုင်ဦးကပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် ပြုလုပ်သည့်မီဒီယာများနှင့် ပုံမှန်တွေ့ဆုံပွဲတွင် အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ”နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ ဒီနှစ်အခြေအနေကို ပြီး ခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ကာလတူနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ကာလတူမှာ အမေရိကန်ဒေါ် လာ ၆၅၉ သန်းပိုဝင်ရောက်လာပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်မှု ကော်မရှင်၏အစည်းအဝေး အ မှတ်စဉ်(၁/၂ဝ၁၉)အပါအဝင် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း နိုင်ငံခြား သားရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ပြု၊ အတည် ပြုလုပ်ငန်း ၄ဝ ရှိပြီး စက်မှုကဏ္ဍ ၃၅ ခု၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း ကဏ္ဍတစ်ခု၊ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍတစ်ခု၊ အိမ်ရာအဆောက်အအုံတည် ဆောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍတစ်ခုနှင့် အခြားကဏ္ဍမှနှစ်ခုတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အလားတူမြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနေဖြင့်စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာကန်ဒေါ်လာ၂ဝဝ ဒသမ ၁၉၇ သန်းအပါ အဝင် ကျပ် ၆၂ဝ၉၁၃ ဒသမ ၂၉၄ သန်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်အနေ ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်စက်မှု လုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့်ပူးပေါင်းကာ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်နှင့် ၂၉ ရက်တို့ တွင်နေပြည်တော်၌ Invest Myanmar summit ကို ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နှင့် ၂၃ ရက်တို့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲကိုပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကာ မတ်လအတွင်း ရန်ကုန်၌ ချင်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲ ကို ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
ဘဏ်ချေးငွေများအပေါ် ကောက်ခံနေသည့် အတိုးနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များ ဗဟိုဘဏ်ပြင်ဆင် သတ်မှတ်
အောင်လံ-သရက် ဧရာဝတီ မြစ်ကူးတံတားကို ဧပြီလတွင် စတင် တည်ဆောက်သွားမည်
မြန်မာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီမှ ကန်ေ??
အမေရိကန် အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသများ၌ မိုးသည်းထန်ကာ ရေကြီးမှုများဖြစ်ပေါ်နေ
သီရိလင်္ကာ တောင်ပိုင်း ရုတ်တရက် ရေကြီး၊ လူပေါင်း ၈ဝဝဝ ကျော် ထိခိုက်